हुँदा हुँदै वडाध्यक्ष कप पनि …. – Janacharcha.com
» खेल अंक: 2020
हुँदा हुँदै वडाध्यक्ष कप पनि ….
Janacharcha.com शनिबार, पौष २६, २०७६ मा प्रकाशित
विराटनगर, पुष २६
विभिन्न प्रतियोगिताको अघिपछि नाम वा पद जोडेर जनप्रतिनिधिहरु आज भोली हाईलाइटमा आउन खोजीरहेको देखिन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मेयर हुदा हुदै वडा अध्यक्षको पद जोडिएर समेत आजभोली विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुन थालेका छन् ।
त्यसरी पद जोडेर प्रतियोगिता आयोजना गराउदा जनप्रतिनिधिहरुले समेत आयोजकलाई सजिलै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको छन् । नाम जोडेपछि सजिलै पैशा झर्ने भएकाले आयोजकले पनि स्पोनसरका लागी नामका भोका जनप्रतिनिधिलाई खोजिरहेका हुन्छन् ।
मोरङ जहदा गाँउपालिका वडा नं ४मा पौष २६ गते आयोजना हुन लागेको वडाध्यक्ष कप क्रिकेट टुर्नामेन्टले पनि जनप्रतिनिधिहरु नामको वास्तवमै भोका रहेछन् भन्ने पुष्टी गरेको छ । टुर्नामेन्ट आयोजकले प्रतियोगिताको नाम वडाध्यक्ष कप जुराईदिएपछि, वडा ४ का अध्यक्ष जयन्त नरत गिरीले उक्त खेलको ५० प्रतिशत खर्च वडाले वेर्होने घोषणा गरिदिएका थिए ।
जहदा गाउँपालिका वडा नं ४ मा हुन गईरहेको वडाध्यक्ष कप क्रिकेट टुर्नामेन्ट एक उदारण मात्र हो । हुन त, यसभन्दा अघि पनि मुलुकका विभिन्न वडाहरु वडाध्यक्ष कप टाइटल दिएर प्रतियोगिता आयोजना भईसकेको छ । यसरी नाम वा पदलाई टाईटल दिएर प्रतियोगिता गराउदा जनप्रतिनिधिहरु महत्वकांशी र नामको भोको भएको समाजमा सन्देश गइरहेको छ । खेलकुद प्रतियोगिता गराउनु राम्रो कुरा हो तर राष्ट्रपति देखि वडाअध्यक्षसम्मको टाईटल दिएर कुनै पनि प्रतियोगिता गराउदा, समाजमा भने राम्रो सन्देश जादैन् ।
कसैको नाम वा पदलाई टाइटल दिनुभन्दा त्यस क्षेत्रको महत्वपुर्ण चिज वा प्रकृतिक सम्पदालाई टाइटल दिए त्यस क्षेत्रको प्रचारप्रसार समेत हुने थियो कि ?